Naukri Gulf Shaqooyinka iyo Shaqada ee Naukrigulf Search for Career 🥇
Naukri Gulf - Shaqada Naukrigulf.com
Naukri Gulf waa shirkadda ugu fiican. Gaar ahaan dadka shaqo doonka ah. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, kooxdayada ayaa soo bandhigtay dib u eegis faahfaahsan Waayo dadka raadinaya in ay ka shaqeeyaan caalamka. Fadlan fiiri hoosta. Halkaas waxaad ka heleysaa jawaabaha sababta Naukrigulg ay tahay goobta shaqada ugu fiican. Maxay tahay sababta ay u qalantay in laguugu rogo CV-gaaga. Hubi in shirkadeenu ku talinayso in ay sii socoto. Oo ka dhig mid ka mid ah musharaxiinta diiwaangashan. Sida xaqiiqda ah, kooxdayadu waxay samaysay baaritaan qoto dheer. Iyo caddayn cad. U fiirso sida ay kuu caawin karaan. Gaar ahaan si ay shaqo u helaan gobolka Gacanka sidoo kale Hindiya iyo Bariga Dhexe.
Shaqooyinka Bariga Dhexe - Shaqo raadinta - Shaqooyinka Shaqada
Naukrigulf.com waa bog internet oo shaqo. Guud ahaan, ku shaqeeya Hindiya. Oo waa mid ka mid ah kuwa caanka ah. Shirkadda Dubai City waxay jeclaan laheyd inay fiiriso aragti dhaw. Sida xaqiiqda ah, bogga Naukri waxaa aasaasay Ganacsi Aasiya ah. Qofka aqoonta sare leh, magiciisu waa Sanjeev Bikhchandani. Qofka ganacsigani waa mid aad u sareeya oo ku soo galay Hindiya. Shakhsiyaddan ganacsi waxay leedahay waxay bilaabeen goobtan shaqo ee Hindiya ee 1995. Tan iyo markaas, website-ku wuxuu noqonayaa mid caan ah. Sababtoo ah dadka Hindida waxay bilaabaan inay raadiyaan shaqo caalami ah.
Hawlgalkii ugu weynaa, iftiinka koritaanka, Naukri.com ayaa ku koray 2010 illaa 2018. Bilawga cusub ee CV ayaa ku socota goobta shaqada. Dhinaca kale, boggaani wuxuu ku saabsan yahay 49.5 million shaqo doonayaal diiwaan gashan. Inkasta oo ay taasi run tahay, dhammaantood ma aha inay ka yimaadaan Hindiya. Sababtoo ah goobta xirfaddan meelaynta shaqooyinka xayeysiis ah aduunka oo idil. Sidoo kale waa in la xasuusto, in meheraddan shaqadu sii socoto. Si dhakhso ah, shirkaddani waxay gaadhi doontaa hareeraha 1 Million. Bil kasta adduunka caawinta qorshaynta xirfadda.
Ilaa wakhtigan xaadirka ah, celcelis ahaan 50,000 shaqo doonka ah oo u gudbinaya CV. Dhinaca kale 11,000 ayaa dib u bilawday gudaha gudaha. Maalin kasta oo ku biiraya shaqo raadiye cusub. In ka badan 130,000 dib u bilaabo ayaa lagu daray maalin kasta. Iyo inta ay shaqaaleeyayaashu u gudbinayaan CVS. The shaqaale shirkad ah oo caawinaya kuwa kale. Ilaha Wikipedia ayaa sheegaya in shirkadu ay tahay shaqaale ka badan shaqaale 5000. Goobta xirfaddan waa mid ka mid ah shirkadaha faa'iidada yar ee Hindiya. Guud ahaan, saafi ayaa maamusha internetka. Iyo mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsiyaha badan ee ku dhex jira shirkadaha. Hubaal waddanka sida India iyo wadamada Khaliijka.
Maxay tahay sababta Naukri Khaliijka No.1 Job Site?
Si fudud sababtoo ah waa shirkadda ugu weyn India. Shirkaddayadu waxay soo saartay qoraal gaar ah. Waa maxay sababta shirkadani aad u weyn tahay? Sababtoo ah waxay leedahay sheeko dheer oo ku saabsan internetka. Dad badan ayaa isticmaalaya iyaga si aad u hesho socodsiinta wareysiyada. In ka badan 99 boqolkiiba musharixiinta. Dhammaystirid nuucyada shaqadan. Joogitaanka warbaahinta bulshada. Intaa waxaa dheer in badan oo shaqooyin banaan oo cusub oo dhan Google iyo Facebook. Dhinaca kale, shirkado badan oo waaweyn ayaa soo diraya Shaqooyinka bannaan ee shirkadan.
Shirkadda Dubai City, taas oo maskaxda ku haysa, si xoog leh latalin. Fadlan iska diiwaangali NaukriGulf. Sababtoo ah waa u qalantaa. Gaar ahaan sida shaqaale Hindida ah. Intaa waxaa dheer, markaad booqato Google. Shirkadan ayaa si fudud u muuqata sida shirkadda ugu fiican online. Shaki kuma jiro sababtoo ah shirkadani waxay bilowday inay ka shaqeyso 1995. Tan iyo markaas ayaa koray internetka boosas weyn.
Ma booqanaysaa shaqo raadinta Naukri India?
Naukri Gulf waa shirkad khaas ah oo online ah oo Hindiya ah. Hubi mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee qorista. Bixinta adeegyo fiican iyo adeegyada macaamiisha ugu sareeya. Xilligan la joogo goobta shaqadu waxay leedahay macaamiisha shirkadda 51,000. Sida laga soo xigtay Wikipedia. Taasi oo ay ku jiraan shirkadaha la-talinta shirkadaha. Iyo qaar badan oo ka mid ah bixinta Naukri.com ee loogu talagalay adeegyo sida helitaanka xogta, xayeesiinta / liiska goobaha ka mid ah loo shaqeeyaha ugu fiican.
Ma ogtahay in shaqadani? Miyuu ugu caansan India? Intaa waxaa dheer, Shaqaalaha ajinebiga ah ee shaqo doonka ah waxay heli karaan shaqo oo leh meeshan shaqo. Si cad u jecel goobta shaqada. Si fudud sababtoo ah waa bilaash. Iyo shirkadda oo dhan. Bilawga waxaa lagu shaqeeyaa 1995. Sidaas awgeed waa runtii u qalmaa inay shaqo la qabsato. Shaki kuma jiro. Cabbirka shirkada sida tan marwalba waa sharci. Dhanka kale, shirkadan waxaa loo isticmaali karaa qorsheynta xirfadaha. Wixii helitaanka riwaayado banaan oo ka yimaada Hindiya ilaa wadamada Khaliijka. Sidaa daraadeed, iyada oo arrintani maskaxda ku hayaan waxay Hindiya qayb ka tahay bogga. Goobta shaqada sida Naukri aad ayey ugu fiicantahay waxa ay qabtaan. Oo taasna maanka ku hay, ka caawinta haweenka u safraya inay shaqo helaan. Si hubaal ah u noqo mid ka mid ah kuwa adduunka ugu fiican.
Naukri shaqo baadi goobaha Delhi iyo Chennai?
Qayb kale oo ka mid ah shirkaddani waa diinta Hindiya. Gaar ahaan Delhi iyo Chennai. Sida dad ah oo raadinaya shaqo Hindiya. Dhab ahaan waa in ay eegaan qeybtooda Hindiya sababtoo ah halka ay ka yimaadeen bixinta fiiso. Waxaa jira shaqooyin badan oo shaqooyin banaan oo ku yaal Hindiya. Iyo hubaal in badan oo iyaga ka mid ah ayaa jooga Delhi. Waa wort inaad booqato oo eegto. Laga soo bilaabo fursadaha cusub ee xirfadaha cusub. Shaqooyinka Naukri ee ku yaala Chennai maalin walba waa la dhajiyaa. Sidaa darteed, sida shaqo raadiyaha, waa in la xusuustaa. Taasi xaruntan shaqo ayaa ogtahay sida loo horumariyo. Dhanka kale, shaqo raadinta dibedda. Gaar ahaan gobolka Gacanka. Iyadoo NaukriGulf.
Waa maxay sababta naukrigulf.com?
Sababtoo ah waa 100% Free. Waxaa intaa dheer, qofku wuxuu dalban karaa xirfadda. Naukri Gulf Careers, natiijada, waxay heleen qiimeyn heer sare ah. Laga soo bilaabo sanadaha dambe caawinta maamulayaasha. Dadkuna waxay ka yimaadeen adduunka oo dhan u diraan CV iyaga. Xaaladahan oo kale, Naukri Gulf Careers. U soo noqo si aad u fiican. Helitaanka shaqo cusub iyo shaqaaleyn leh Naukrigulf ayaa noqda mid sahlan. Diiwaanka shirkadani waa mid aad u weyn. Bixinta meelo badan oo banaan. Guud ahaan ka hadlida shirkadda 500 Forbes. Ilaa iyo Shaqooyinka Bariga Dhexe ee degaanka ayaa bixiya sida Dubai Mall. Iyo sida kor ku xusan, isku day inaad hesho CV-gaaga. U dir shaqaalaha qorista. Dhanka dheer, shaqo raadso Gulf.
Sidaas, isku day inaad shaqo ka raadso Gulf Area. Intaa waxaa dheer, in la soo bandhigo dalabaadka ugu fiican ee Imaaraadka. Sababtoo ah dhab ahaantii, ma jirto meel wanaagsan oo Gulf ka shaqeeya. Naukri waa hubaal kuwa ugu fiican. Iyo xirfad ay bixiyaan iyaga. Mid ka mid ah kuwa caanka ah. Sidaas, dib u soo dejinta maanta. Codsiga ku soo dir ereyga internetka. Iyo inta badan, u diyaari waraysiyada. Sababtoo ah shaqo raadiye Waxaad awoodi kartaa u shaqeeya Garoonka Caalamiga ah ee Dubai. Gaar ahaan Hindiya iyo sidoo kale Emirates. Iyadoo Saudi Arabia iyo Kuwait. Xaqiiqda oo dhan dhamaanba Gacanka Ciraaq. Sidoo kale loo yaqaan Gacanka Carabta. Sidaa darteed, ha kaa dhumin fursadaada si loogu shaqeeyo ammaanka ama sida a u shaqeeyaan sidii kalkaalisada Dubai. Oo noqo dalxiis caalami ah.
Codsashada Naukrigulf shaqooyinka waa u qalantaa?
Shaqo raadiye, waa inaad codsataa Naukrigulf for Jobs. Sababtoo ah goobtan shaqo qorista ee loo yaqaan Naukri.com. Noqo super qorayaal caan ah oo ku yaala UAE. Sida xaqiiqda ah, waxaad ka heli kartaa shaqooyin wanaagsan oo la bixiyo. Tani waa sababta boggan xannaaneeyaha uu noqonayaa goobta shaqada ee No.1 ee India. Ka fariisida Naukrigulf meelo kala duwan ee warshadaha aad rabto.
Shirkadan, waxaad awoodi kartaa Runtii waxaa laga helaa shaqo wanaagsan Mumbai. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, Shirkadda Dubai City waxay kuu soo qoreysaa talooyin dhowr ah. Gaar ahaan haddii aad jeclaan lahayd inaad shaqo raadiso. Hoos waxaad ka heli kartaa goobo shaqo oo badan. Ma aha oo kaliya Naukri Gulf laakiin sidoo kale CareerJet iyo kuwa kale. Dhammaantood way awoodaan waxay kaa caawineysaa inaad ku noolaato maadooyin riwaayadeed ah oo ku yaal Emirates. Sidaas darteed naftaada lataliye fiicanow. Ka bilow shaqada Dubai.
Gabagabaynta goobta shaqada ee Naukri
Aan dhameyno maqaalkayaga. Sidaas darteed, arrintan maskaxda ku hay, haddii aad u baahan tahay inaad doorato. Intii u dhexaysay Hindiya iyo Dubai. Tani goob shaqo ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu sareysa ee ka shaqeeya UAE. Iyo isticmaalka abuurista shirkadkan. Waxay siin doontaa fursad weyn oo loogu talagalay shaqo-dooneyaasha cusub. Laga soo bilaabo Hindiya ilaa Bariga Dhexe iyo sidoo kale Europe. Dhamaan goobahan oo bixiya shaqooyin cusub. Naukrigulf waxay si qarsoodi ah u bixisaa talo bixin. Dhanka kale, shirkaddiisa, waxaad awoodaa inaad hesho macluumaad badan. Tusaale ahaan talooyin ku saabsan xirfadaha. Intaa waxaa dheer, sida loo dalbado shaqo dibedda. Iyo macluumaad dheeraad ah. Sababtoo ah blogkoodu wuxuu ka shaqeynayaa si gaar ah. Sidaas awgeed, kooxdayada doonaysa nasiib wacan. Ku noqoshada cusub ee NaukriGulf. Rajeynaya inaad ku aragto Dubai ama Abu Dhabi.
Naukri Gulf Shaqooyinka iyo Shaqooyinka ee Naukrigulf. Mid ka mid ah shabakada ugu fiican si aad shaqo uga hesho Kuwait, sidoo kale India iyo Emirates, waa Naukri.com. Kooxdayadu waxay caawimaysaa ajandayaal si ay u helaan wax badan. Gaar ahaan goobta shaqadan. Marka loo eego xaaladahaas, shaqaalahayaga takhasuska ah wuxuu caawiyaa dadka shaqo doonka ah. Waxaan u qoreynaa dadka shaqo doonka ah ee caalamiga ah. Xaaladdan oo kale, kooxdayadu waxay ku shaqeyn kartaa UAE. Websaydaan wuxuu si fiican u shaqeynayaa. Gaar ahaan, qof kasta oo jooga suuqa caalamiga ah. Tusaale ahaan shaqo doonka, adduunka oo idil. U fiirsashada codsaneyso shaqo.
Published by Shirkadda Dubai City at October 15, 2017
Meelaha Shaqada ee ugu Sarreeya Dubai, UAE ⭐⭐⭐⭐⭐
Shaqooyinka ugu Wanaagsan Dubai, Dubai UAE Shaqooyinka Dubai oo booqasho ku yimi Dubai UAE Shaqooyinka Dubai ayaa ku dhiirri-galiya inay caawiyaan, si ay u helaan xarumo shaqo oo ku yaal Dubai, UAE. Shaqooyinka Dubai waxay soo bandhigaan talo faahfaahsan. Gaar ahaan si ay u gaaraan goobaha shaqo ee ugu sareeya ee ku yaala UAE. Sida xaqiiqda dhabta ah ee goobaha shaqo ee Dubai City. Ka ciyaarida doorka ugu muhiimsan ee ka shaqeynta iyo ku noolaanshaha Dubai. Shaqaaleyaal cusub oo khibrad shaqo leh. Inkastoo tani ay noqon karto runta ugu badan uguna badan. Ma raadineysaa shaqooyin dheeraad ah oo ka socda dalalkooda. Shakhsi ahaan shaqo doone kasta waxaa loo baahan yahay in lagu meeleeyo jawi shaqo oo xirfad leh. Su'aalaha keligood ah Dubai waa ku fiican yihiin? Dhanka kale, si aad shaqo uga hesho Dubai City. Iyadoo mushaharka mushaharka sareeyo. Waxaad u baahan tahay inaad si adag u shaqeyso. Iyo isticmaalka tiknoolajiyadda horumarsan [...]
Ma ka heshay?84